Heathrow successfully incorporates sustainable aviation fuel into its operation | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Heathrow nwere ihe ịga nke ọma na-etinye mmanụ ụgbọ elu na-adigide na arụmọrụ ya
Mmanụ ụgbọ elu na-adịgide adịgide iji nweta ụgbọ elu Heathrow dị ka ọdụ ụgbọ elu na-eme iji belata ikuku.
Arụ ọrụ na Vitol Aviation na Neste, Heathrow abụrụla ọdụ ụgbọ elu UK izizi iji jikọta mmanụ ụgbọ elu na-adigide (SAF) na nkesa mmanụ ya.
N'ihu nke G7 Summit, a ga-agwakọta mmanụ ọkụ n'ime isi ọdụ ụgbọ elu UK maka mmanụ ọkụ site na 3 June
Inye ya, nke ya na mmanụ dị mkpa iji nwee ike n'etiti ụgbọ elu 5-10 dị mkpirikpi, na-ezube ije ozi dị ka ihe akaebe nke echiche iji mee ka SAF dị ukwuu na-aga n'ihu
Heathrow etinyewo ihe na-aga nke ọma na mmanụ ụgbọ elu (SAF) na-arụ ọrụ nke ọma, tupu nzukọ G7. Na-arụ ọrụ n'akụkụ Vitol Aviation na Neste MY Sustainable Aviation Fuel ™, a ga-etinye mmanụ ahụ n'ime isi mmanụ ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu taa, ma jikọta ya iji gafee ụgbọ elu na-arụ ọrụ na Heathrow na ụbọchị ole na ole sochirinụ. Ọ bụ ezie na mmanụ ọkụ nwere ike ịdị obere - nke dabara na mmanụ ụgbọ elu 5-10 dị mkpụmkpụ - nnyefe azụmahịa a ga-eweta ihe akaebe nke echiche na ọdụ ụgbọ elu kasịnụ nke UK. Imezu ihe omuma a bu uzo mbu di nkpa iji gosiputa ochichi na teknụzụ ga-aru oru n'ibelata carbon site na ugbo elu ma oburu na atumatu iwu ziri ezi iji kpalie iburu onu ogugu.
A ga-ejikọ ọkachamara ọkachamara Vitol Aviation na ọkachamara njikwa mmanụ ụgbọelu yana ikike mmepụta SAF nke Neste. Neste MY SAF meputara 100% site na mmeghari ohuru na nke adigide na ihe ndi ozo, dika mmanu eji esi nri na nke anumanu na azu. Neste MY Sustainable Aviation Fuel n'ụdị ya dị mma na n'oge ndụ, ọ na-ebelata ihe ruru 80% nke ikuku gas na-ekpo ọkụ ma e jiri ya tụnyere mmanụ ụgbọ mmiri na-eme.
Asingbawanye ojiji nke Sustainable Aviation Fuel (SAF) bụ ihe dị mkpa na decarbonization nke ụgbọelu. Ya na teknụzụ ndị ọzọ, ọ na-enye ụzọ iji nweta ụgbọelu efu na akara na nkwekọrịta Paris. Ka anyị na-abịakwute COP26 na Glasgow ugbu a bụ oge maka Gọọmentị, ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ iji rụkọta ọrụ na iji SAF mee ihe iji hụ na ọ dị ezigbo afọ a.
Nkwuputa nke taa na-egosipụta akara na-esote na Heathrow na atụmatụ atụmatụ ụgbọelu UK maka ụgbụ efu na-efe efe. Iji mezuo ngwa ngwa nke mmepụta nke SAF, Heathrow na-akpọ oku ka Gọọmentị UK setịpụ iwu na-arịwanye elu nke chọrọ opekempe 10% SAF site na ụgbọ elu site na 2030, na-abawanye ma ọ dịkarịa ala 50% site na 2050. Nke a kwesịrị ịdị n'akụkụ mkpali azụmahịa maka ụgbọ elu iji kpalite mmụba na ịzụlite akụ na ụba, yana iji nyere aka hụ na UK nọ n'isi nke mmepụta SAF.
Heathrow esorola ndị mmekọ na-arụ ọrụ gụnyere ndị ụgbọ elu na itinye aka na SAF ka ụlọ ọrụ UK wee nwee ike mezuo ebumnuche ya ịbụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu na-adịgide adịgide n'ụwa. 58% nke ụgbọ elu Heathrow site na mmegharị njem ụgbọ elu etinyela aka na 10% SAF ojiji site na 2030. Kọmitii kachasị mgbanwe mgbanwe ihu igwe maka SAF ojiji site na 2030 bụ 7%, na-egosi ụgbọ elu Heathrow adịworị 84% n'ụzọ na-aga atụmatụ a.